Yan Aung: ဘလော့ဂ်ပို့စ်လေးများတွင် Footnote ထည့်နည်း
ဒါကတော့ ဒီပို့စ်လေးရဲ့ အနှစ်ချုပ်ပါ. နောက်နောင် မေ့သွားလို့ ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အချိန်မကုန်ဘဲ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်ရှာတွေ့နိုင်အောင်လို့ ပို့စ်လေးရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ တင်ပေးထားတာပါ. အောက်မှာ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက် ပါပါတယ်ခင်ဗျာ.
၁. ကိုယ်ချိတ်ချင်တဲ့ footnote နေရာလေးနားရောက်ရင် ဒီလိုရေးရပါမယ်.
<sup><strong><a href='#your footnote name'>your footnote symbol</a></strong></sup>
၂. ရှင်းလင်းချက်ကို ပို့စ်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ ဒီလိုလေးရေးပေးခဲ့ရပါမယ်.
<a name="your footnote name"><strong>your footnote symbol</strong></a> : your explanation goes here.... blah blah blah....
ဒီတစ်ခါတော့ အရမ်းကို အသုံးဝင်မယ့် Hacks လေးတစ်ခု အကြောင်း ပြန်လည် ဝေမျှချင်ပါတယ်. ဒီ Hack လေးကို ကျွန်တော်လိုချင်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ. ခုမှပဲ ရှာတွေ့တော့တယ်. တွေ့တွေ့ချင်းပဲ ဒီစာကို ကောက်ရေးဖြစ်တယ်ဗျာ…
ဘာလဲဆိုတော့ မိမိရဲ့ ပို့စ်လေးတွေမှာ Footnote လေးတွေ တပ်တာပါ.
Footnote ဆိုတာလေးတွေကို သိသူတွေ ရှိသလို မသိသူတွေလည်း ရှိကြမှာပါ. အကြမ်းဖျင်းပဲ ပြောပြပါမယ်.
Footnote ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရေးသားလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးစာစုလေးတွေထဲမှာ ပါနေတဲ့ ဝေါဟာရ တစ်ခုခုကို အသေးစိတ်ပြန်လည် ရှင်းပြဖို့ တေးမှတ်ထားတဲ့ အမှတ်အသားလေးတွေပါ. စာဖတ်သူက အဲဒီ့ အမှတ်အသားလေးအတိုင်း လိုက်ပြီး အကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်းချက်ကို ရှာဖွေဖတ်ရှု နားလည်နိုင်ပါတယ်.
ပုံမှန် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေသူဆိုရင်တော့ Footnote ပြထားတဲ့ အမှတ်အသားလေးအတိုင်း လိုက်ရှာပြီးတော့ အကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်းချက်ကို ဖတ်ရှုရပါတယ်.
ကွန်ပြူတာစနစ်မှာကျတော့ အဲဒီ့ Footnote အမှတ်အသားလေးကို Click လုပ်လိုက်တာနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်ကို တန်းရောက်သွားအောင် လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်.
ဟုတ်ပါတယ်. ကျွန်တော်အခု ဆွေးနွေးပေးမယ့် Footnote လေးတွေဟာလည်း အဲဒီ့လို Feature တွေ ပါနေမှာပါ.
ဘာလဲဆိုတာ ဆက်မသွားခင် နည်းနည်းသဘောပေါက်သွားအောင် ဥပမာလေးနဲ့ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်.
FootNote၁ ဆိုတဲ့နောက်က နံပါတ် ၁ လေးကို click ခေါက်လိုက်ပါ. ဘာဖြစ်သွားမလဲ…
အခု ခင်ဗျားဖတ်နေတဲ့ ပို့စ်လေးရဲ့ နောက်ဆုံးကို ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး Footnote ဆိုတာလေးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အင်္ဂလိပ်လို ရှင်းပြထားတာလေးကို ညွှန်ပြနေတာ သတိထားမိလိုက်ပါလိမ့်မယ်.
အဲဒါပါပဲ ခင်ဗျာ. ကိုယ်ရေးမယ့် ဆောင်းပါး၊ ပို့စ်၊ သတင်းစတာလေးတွေထဲမှာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ သုံးမယ်ဆိုတာကတော့ ဥာဏ်ရှိသလို စဉ်းစားအသုံးချနိုင်ပါတယ်.
ကဲ. ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မပြောခင် နောက်ပြန် စဉ်းစားလိုက်ကြရအောင်.
အဲဒီ့လို ကိုယ်ပြောပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို နံပါတ်လေး တပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ ပို့စ်လေးရဲ့အောက်ကို အလိုလိုရောက်သွားမယ်ဆိုတာ ကြားထဲမှာ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ထားရမှာပေါ့. မဟုတ်ဘူးလား…
ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားကြမလဲဆိုတာ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်… ကျွန်တော် နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး ဆွေးနွေးသွားပါမယ်. Footnote လေးတွေကို ရေးပုံရေးနည်းကို အရင်ဆုံး ရှင်းပြပေးပါမယ်. ပြီးရင်တော့ မိမိရဲ့ ရှင်းလင်းချက်လေးတွေနဲ့ Footnote လေးတွေကို ချိတ်ဆက်ပုံ ချိတ်ဆက်နည်းကို ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်.
Footnote များ ချိတ်ဆက်ပုံကို ပို့စ်ထဲတွင် ရေးနည်း
ပထမဦးဆုံး Footnote လေးကို ချိတ်ချင်ရင် ပို့စ်ထဲမှာ ဘယ်လိုရေးပေးရတယ် ဆိုတာကစပြီး ဆွေးနွေးလိုပါတယ်.
ပုံမှန်အတိုင်း စာရိုက်သွားပါတယ်. Footnote ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးနားကို ရောက်လာပါပြီ. ကျွန်တော် ဒီလိုရိုက်ပါတယ်.
FootNote<sup><strong><a href='#footnote'>၁</a></strong></sup> ဆိုတဲ့နောက်က နံပါတ် ၁ လေးကို click ခေါက်လိုက်ပါ. ဘာဖြစ်သွားမလဲ…
အဲလိုရိုက်လိုက်ရင် ဒီလိုလေး ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
အဲဒါက ပထမအဆင့် လုပ်ရမယ့်နေရာပါ. အထဲက ကုဒ်ဒင်းလေးတွေကို ထပ်ရှင်းပြပါမယ်.
<sup> ဆိုတာက စာလုံးလေးကို အပေါ်ကို မြှင့်တင်ပစ်လိုက်ချင်လို့ Superscript tag လေးကို ခေါ်သုံးထားတာပါ. မြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ. နံပါတ် (၁) ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးဟာ ပုံမှန် အက္ခရာတွေနဲ့ တပြေးညီတည်းမှာ ရှိမနေဘဲ အပေါ်ကို ရောက်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်.
<strong> ဆိုတဲ့ Tag လေးကတော့ <bold> tag လေးနဲ့ တူတူပါပဲ. အက္ခရာလေးကို ပိုပြီး ထင်ရှားအောင် highlight လုပ်ပေးထားတာပါ.
<a href='#footnote'>၁</a> ဆိုတာလေးကတော့ လင့်ခ်ချိတ်ထားတာပါ. Anchor Tag လေးလို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်. # သင်္ကေတလေးနောက်မှာ သက်ဆိုင်ရာနာမည်ကို ကိုယ်ကြိုက်သလို ပေးခဲ့လို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ. ပြီးရင်တော့ Footnote နာမည်လေးပေါ့. ကျွန်တော်ကတော့ ခပ်လွယ်လွယ် နံပါတ် ၁. လေးကို ပေးထားခဲ့တယ်. တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သင်္ကေတလေးတွေကို စိတ်ကြိုက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်.
နောက်ကပါတဲ့ </a></strong></sup> ဆိုတာလေးတွေကတော့ အရှေ့က Tag လေးတွေကို ပြန်ပိတ်ပေးထားတဲ့ Closing Tag လေးတွေပါပဲ.
ကဲ. ဒီလောက်ဆို ကုဒ်ဒင်းလေးရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်သွားပြီပေါ့နော်. မိမိရဲ့ Footnote လေးကို ကာလာတွေဘာတွေ ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ထည့်နိုင်ပါသေးတယ်. အရုပ်လေးတွေ၊ Flash ပုံလေးတွေ ထည့်ပြီး လင့်ခ်ချိတ်ဦးမလား. ရပါတယ်. အခု ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ နေရာလေးမှာပဲ စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းလို့ရပါတယ် ခင်ဗျာ.
အဲဒါက လင့်ခ်ချိတ်ပုံကို ကိုယ့်ရဲ့ ပို့စ်လေးတွေထဲမှာ ဘယ်လိုရေးသားရတယ် ဆိုတာကို ပြောထားတာပါ. ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရှင်းလင်းချက်နဲ့ ပြန်ပြီး ချိတ်ဆက်ပေးရပါမယ်.
Footnote များကို သက်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ
ကဲ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆောင်းပါးလေးတွေ၊ ပို့စ်လေးတွေထဲမှာ Footnote လေးတွေကိုတော့ ညွန်းပြခဲ့ပြီးပြီနော်. အခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ footnote လေးတွေကို မိမိရှင်းလင်းချက်လေးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးရပါတော့မယ်. အရမ်းလွယ်ပါတယ်. ဒီမှာကြည့်ပါခင်ဗျာ.
အပေါ်က Footnote လေးကို ပြန်ခေါ်ပြီး ရေးပါမယ်. ဒီတစ်ခါကျတော့ အပေါ်ကလို ရှည်လျားထွေပြားရှင်းနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး.
အိုကေ. ကျွန်တော် စာတွေ ရေးသွားတယ်. ရေးတယ် ရေးတယ်. ဟော. footnote ချိတ်ရမယ့် နေရာရောက်လာပြီ. ဒီလိုလေး ရေးပါတယ်.
ရတယ်နော်. အဲဒီလို လုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက် ကျွန်တော်ရေးမယ့် ပို့စ်ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော့်မောက်စ်ရဲ့ cursor လေးကို ထားလိုက်ပါတယ်. ရှင်းလင်းချက်ကို အောက်ဆုံးမှာ ထားမှာမို့လို့ပါ. ဘာလို့ထားလဲဆိုတာ သိပ်ပြီး ခေါင်းကိုက်ခံစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဦး.
<a name='footnote'><strong>၁. FootNote</strong></a> : A Footnote is an explanatory note at the bottom of the page inabook which refers toapoint in the text usingasymbol like an asterisk oranumber. When reading the page if you come upon suchasymbol your gaze is automatically diverted to the foot of the page for the detailed explanation.
အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Footnote ချိတ်ဆက်ပုံ ချိတ်ဆက်နည်း ပြီးဆုံးပါပြီ ခင်ဗျာ.
ရှင်းလင်းချက် ရှည်လျားသွားလို့ မမှတ်မိမှာစိုးရင် ဒါလေးကို စိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားပါ.
၃. အထူးသတိပြုရမှာကတော့ အနီရောင်ပြထားတဲ့ နေရာလေးနှစ်ခုဟာ နာမည်တူရပါမယ်. ဒါမှလည်းပဲ အချင်းချင်း ပြန်ပြီး မှတ်မိမှာပေါ့ဗျာ. မဟုတ်ဘူးလား. အပေါ်မှာ လင့်ခ်ချိတ်ထားခဲ့တုန်းက နာမည်ပေးခဲ့တာတစ်ခု. အောက်ကရှင်းလင်းချက်မှာ နာမည်တစ်ခုဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး recognize ဖြစ်တော့မှာလဲ. Right?
အဲဒီ့မှာ ” ဆိုတဲ့ အပိတ်မျက်တောင်လေးနောက်က ۩ လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် ဒီကဗျာလေးကို ဘယ်သူကရေးတယ်. ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ရှင်းလင်းချက်လေး ရှိတဲ့နေရာဆီကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်.
<sup><strong><a href='#letwaisonenaya'>۩</a></strong></sup> ဆိုပြီး ကုဒ်ဒင်းလေး ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်.
ပြီးတော့ မိမိပို့စ်ရဲ့ ဟိုးအောက်ဆုံးမှာ သက်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက်ကို ရေးပါတယ်. အပေါ်က မူရင်းစာပိုဒ်မှာ “letwaisonenaya” လို့ နာမည်ပေးထားခဲ့ပါတယ်. ဒါကြောင့် အခု ကျွန်တော်ပြန်ချိတ်မယ့် လင့်ခ်လေးကိုလည်း အဲဒီ့နာမည်လေးပဲ ပြန်ပေးပါမယ်.
ပြီးသွားတာနဲ့ ပို့စ်လေးရဲ့ အောက်ဆုံးကိုသွားလိုက်ပါတယ်. ရှင်းလင်းချက်ကို ဒီလိုလေး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်.
<a name='letwaisonenaya'><strong>۩</strong></a> : အဲဒီ့ကဗျာလေးကို လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်ကြီးက ရေးခဲ့တာပါ. အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တပ်မတော်တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်ပဲ လက်နက်အင်အားကောင်းကောင်း ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုမရှိရင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ တပ်မတော်တစ်ခု ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဓားသွားများဟာလည်း ထက်သင့်သလောက် မထက်နိုင်ဘူး။ လှံများဟာလည်း စွမ်းသင့်သလောက် မစွမ်းနိုင်ဘူး။ တပ်မတော်ရဲ့အင်အားဟာ စွမ်းရည်ရှိဖို့ဆိုရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုလိုပါတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်.
letwaisonenaya ဆိုတဲ့ Footnote နာမည်လေးနှစ်ခု လာကိုက်ညီရတာကို သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်.
ကဲ. ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်လောက်ကြပြီ ထင်ပါတယ်ဗျာ.
ဒီ Hack လေးကို ဘလော့ဂ်တွေအတွက်သာမက ၀က်ဘ်ဆိုက်ဆောင်းပါးများမှာလည်း ဥာဏ်ရှိသလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.
ဆက်လက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာရင်း ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးလေးတွေကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ဆန် ရေးသားပြုစု တင်ပြနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်.
၁. FootNote : A Footnote is an explanatory note at the bottom of the page inabook which refers toapoint in the text usingasymbol like an asterisk oranumber. When reading the page if you come upon suchasymbol your gaze is automatically diverted to the foot of the page for the detailed explanation.
۩ : အဲဒီ့ကဗျာလေးကို လက်ဝဲသုန္ဒရ အမတ်ကြီးက ရေးခဲ့တာပါ. အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တပ်မတော်တစ်ခုဟာ ဘယ်လောက်ပဲ လက်နက်အင်အားကောင်းကောင်း ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုမရှိရင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ တပ်မတော်တစ်ခု ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဓားသွားများဟာလည်း ထက်သင့်သလောက် မထက်နိုင်ဘူး။ လှံများဟာလည်း စွမ်းသင့်သလောက် မစွမ်းနိုင်ဘူး။ တပ်မတော်ရဲ့အင်အားဟာ စွမ်းရည်ရှိဖို့ဆိုရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှုလိုပါတယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီနေရာက ပို့စ်လေးကို သင့်တော်အောင် ဘာသာပြန်ဆို ဖြည့်စွက်ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ကိုရန်ရေ ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။ FF3 မှာ အဆင်မပြေဘူးဗျ။ IE နဲ့တော့ရတယ်။ ဒါကြောင့် FF3 ကိုတော်တော် တောက်မြင်ကပ်နေတာ :P
Great!Thanks Ya Naung Mg Mg Toat.:P